Liverpool oo garaacday Chelsea - BBC News Somali
Liverpool oo garaacday Chelsea
17 Sebtembar 2016
Image caption Henderson oo dhaliyay goolkii guusha kaasi oo noqday midkii ugu horreeyay ee uu 20 ciyaar u dhaliyo Liverpool
Kooxda Liverpool ayaa sii wadda qaabka wanaagsan ee ay u dheelaysay ciyaaraha Horyaalka Ingiriiska, iyagoo xalay guuldarradii ugu horreysay dhadhansiisay kooxda Chelsea ee uu maamulo tababare Antonio Conte, sidaana ay ku soo galeen afarta kooxood ee ugu horreysa horyaalka.
Ciyaarta oo ka dhacaysay garoonka Stamford Bridge ee Chelsea ayaa inta badan ay ku gacansaraysay kooxda Liverpool waxa ayna ku soo dhammaatay 1-2 ay guusha ku raacday Liverpool.
Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa garoonkaasi ku badiyay xagaagii tagay, saddexda dhibcood ee uu haatan Chelsea ka qaatayna waxa ay sii xoojinaysaa awooddiisa ciyaareed, isagoo todobaadkii ugu horreeyayna ka adkaaday kooxda Arsenal halka uu barbaro la galay kooxda Tottenham.
Liverpool ayaa doonaysay inay ciyaarteeda ku dhisto guushii muhiimka aheyd ee ay todobaadkii tegay ka gaartay kooxda Leicester City oo ay ku xaaqday 4-1, waxaana goolka u bilaabay daafacooda Dejan Lovren halka goolka labaadna uu si qurux badan 25 yaardi meel u jirta goosha uu ka dhaliyay kabtankooda Jordan Henderson.
Ciyaaryahan David Luiz oo £32m ay Chelsea uga soo gadatay kooxda Paris St-Germain ayaa saftay kulankii ugu horreeyay tan iyo markii uu dib ugu soo laabtay kooxda, isagoo badalay ciyaaryahanka dhaawaca ah ee John Terry.
Diego Coasta ayaa markale muujiyay inuu yahay weerraryahan caalami ah, oo waxa uu dhaliyay goolka kaliya ee ay la timid kooxda Chelsea.
Hasayeeshee goolkaasi waxba kama uusan badelin natiijada ciyaarta, oo sidaa ayey Liverpool ku aruursatay saddexdii dhibcood ee ciyaarta maadaama ay ku badishay 1-2.